चीनमा २ हजार पर्ने कोरोना जाँच गर्ने उपकरणलाई ७ हजार मूल्य राखेर टेण्डर पास गर्न नपाउँदा औषधि र उपकरणहरुको खरिदमा ढिलाई - Sidha News
काठमाडौ। यतिबेला संसार कोरोना भाइरसले थलिएको छ। अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किदै गैरहेको छ। हजारौं मानिस कोरोना भाइरसले गर्दा ज्यान गुमाइसकेका छन् भने लाखौँ मानिसहरु कोरोना भाइरस संक्रमित छन्।
सुविधा सम्पन्न विकसित मुलुकमा कोरोनाको महामारी अगाडी घुंडा टेकिसकेका छन्। धन्य छौं हामी नेपाली त्यस्तो विपत्ति अहिलेसम्म हामीले सामना गर्नु परेको छैन। मुलुकमा कोरोना संक्रमित अहिलेसम्म ४ जना देखिए पनि कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन। तर , विश्व नै कोरोनाले त्रसित बनिरहेको बेला हामि नेपालि पनि अछुत छैनौं।
कोरोना चेक जांच गर्ने उपकरण र औषधिमा सरकारले ढिलाई गरिरहेको छ , कारण के हो ? यसै विषयमा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल आफ्नो आधिकारी फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ :
“सर्वसाधारणलाई तालबन्दी, माफिया र तस्करलाई मालबन्दी
कोरोना औषधिको टेण्डरमा कमिशनका लागि चलखेल गरेर असुरक्षा बढाईरहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग सम्बद्ध कमिशनखोर माफियाहरु, बिरामीको उपचार गर्न नमान्ने निजि अस्पतालहरु, लब डाउनको बेला ढुंगा गिट्टी र वन विनाश गरिरहेका तस्करहरु, जथाभावी मूल्य बढाउने ठूला कालाबजारीयाहरु मध्ये सरकारले कसैलाई कार्वाही गरेको सुन्नु भएको छ ? यी सबै दलकै वरिपरिका मानिस हुन्।
चीनमा २ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने कोरोना जाँच गर्ने र्यौटा उपकरणलाई ७ हजारको मूल्य राखेर टेण्डर पास गर्न नपाउँदा औषधि र उपकरणहरुको खरिदमा ढिलाई गर्ने व्यक्ति ओलीका स्वास्थ्य मन्त्री हैनन् ? लक डाउन भनेर मानिसहरुलाई बाहिर निस्कन नदिने बाहेक कोरोना प्रतिरोधका लागि अर्को कुनै भरपर्दो तयारी भैरहेको छैन। स्वविवेकले सुरक्षित हुनु नै अहिलेको एक मात्र भरपर्दो उपचार हो।”